၀၇၊ ၀၉၊ ၂၀၀၉
Glada Hudik, Sweden
ဘုန်းကြီးကို ဦးတပ်၊ လူကို...အသျှင်....လို့ ခေါ်ကတ် ရွှီရခိုင် နလပိန်းတိ။
Posted by khinemrathein at 12:18 PM
ကြွေးကြော်သံ။ ။.(ရခိုင့်စာပီ ရှင်သန်ထမြောက်ရေး.............ငါရို့အရေး........ငါရို့အရေး။) ၃ ခေါက်အော်ပါ။
Posted by khinemrathein at 11:42 AM
ငါ.....blueberry သီး ကောက်နီရပျာ။
၀၂၊ ၀၉၊ ၂၀၀၉
Glada Hudik (Sweden)
Posted by khinemrathein at 7:40 AM
၀၇၊ ၀၈၊ ၀၉
Posted by khinemrathein at 6:45 AM
ဋ. ဍ. ဠ ပိုင်ကောက်ကွေ့လို့
မိုးသောက်ကြယ်ပိုင် လင်းလက်လို့ တောက်ပလိုို့
လမိုက်ညာဉ့်ပိုင် မိုးရိပ်ဖုံးလို့ နီဝင်လို့
ပြက်ထောင့်၊ ဆင်ဝင်ခန်းက ဆီမီးခွက်
ရီနံဆီကုန်လို့ မီးစာတုံးလို့ မီးသီလို့……
ကြက်မပေါင်ကြား အတောင်ကျိုးလို့ ဂုတ်ထိုးလို့……
ရွင့်ရွက်ဝါ လီမှာလွင့်လို့ လမ်းပျောက်လို့
Posted by khinemrathein at 11:39 AM
၂၅၊ ၀၁၊ ၂၀၀၉
Posted by khinemrathein at 11:34 AM
နှစ် (၂၀၀)ကျော်တိုင် ကျွန်ပြုခံရေ
Posted by khinemrathein at 11:32 AM
လောကကြီး၏ အမြင့်မြတ်ဆုံး၊ အကောင်းဆုံးလို့
လောကကြီး၏ လွတ်လပ်ပျော်ရွှင်မှု အဟိဆုံးလို့
ရက်စွဲ။ ။ ၀၃. ၀၃. ၂၀၀၇
ဒေါင်ဒေါင်ဆန္တာထောင်၊ ကာလာကတ္တား၊ အိန္ဒီယာ။
Posted by khinemrathein at 10:01 AM
စွန့်စား၊ ၀ံ့စား၊ စွမ်းဆောင်မူတရားလည်း မဟိခ
မျိုးစောင့်၊ မျိုးချစ်တရားကိုလည်း မဟောနိုင်ခ
ရခိုင့်အက္ခရာစာပီ၊ ရသမှီအောင်လည်း မဖော်ထုတ်နိုင်ခ
ကြီးဆင်းထု၊ ကျောက်ဆင်းထု၊ အုပ်ဆင်းထုကို...ထား
ဦးဆောင်လမ်းပြ၊ ကိုယ်တွိရာဇ၀င်ကိုလည်း မရွီးပြနိုင်ခ
ရက်စွဲ။ ၀၃၊ ၀၆၊ ၂၀၀၆
Posted by khinemrathein at 10:00 AM
ရိုးမတောင်ခြီ ဝေသာလီ ထောင်တိုင်းဝိုင်းရံညီ
၀တီလေးရပ် နဒီလေးရပ် ထောင်တိုင်းထပ်
ရခိုင်ပြည် ငါရို့ပြည် ဘုံမိရက္ခနက်သန်ပြည်......။......။
မှတ်ချက်။ ။ ဤကျဗျာကို ရခိုင်အမျိုးသားသာခြင်း (Arakan National Song or Anthem) အဖြစ်ရွီးစပ်ခြင်းဖြစ်ပါသည်။ ရခိုင်အမျိုးသားသာခြင်းမဖြစ်နိုင်လာသိမ့်တိုင်အောင် ရခိုင်လူမျိုးများအတွက် တစုံတရာအတိုင်းအတာထိ အကျိုးသက်ရောက်မူဟိပါလိမ္မည်ဟု မျှော်လင့်ပါသည်။ သို့သော် ဤကဗျာပါ နဒီလေးသွယ်မှာ အငြင်ပွားစရာဖြစ်နိုင်ပါသည်။ ၄င်များမှာ မေယုနဒီနှင့် မဟီရာနဒီဖြစ်ပါသည်။
မဟီရာနဒီသည် မအီမြစ်ကို ခေါ်ဆိုခြင်းဖြစ်ပါသည်။ ရခိုင်ပြည်တွင်း၊ ပြည်ပ၊ တော်လှန်ရေး၊ နိုင်ငံရေး၊ ရခိုင့်စာပီပညာသျှင်အများစုမှာ နဒီလေးစင်ကို ပြည့်ပြည့်စုံစုံမဖော်ပြနိုင်ကြပါ၊ မဟီမြစ်၊ ကန်သာမြစ်များသည် ရခိုင်ပြည်တောင်ပိုင်ဒေဿမှ မြစ်များဖြစ်ကြသော်လည်း စာပီးများ၌ဖော်ပြမှုအလွန်နည်းပါးသည်။ ယင်းအတွက်ကြောင့် မဟီမြစ်ကိုဖြည့်စွက်ဖော်ပြခြင်းဖြစ်ပါသည်။ အများသဘောရ ကန်သာမြစ်ကို ကြစ်နှစ်သက်ပါက ၄င်းမြစ်ကိုသံစိုင်မပျက်ဖြည့်စွက်ဖော်ပြသီဆိုနိုင်ပါသည်။
ဤကဗျာကို အမျိုးသားသာခြင်းအဖြစ် သီဆိုလိုက်လျှင် စက္ကန့် ၅၀ ကျော်ဖြစ်ပါသည်။ နိုင်ငံတကာအမျိုးသားသာခြင်းတိုင်းသည် အရှည်ဆုံး ၁ မိနစ်ဖြစ်ပြီး၊ အတိုးဆုံး စက္ကန် ၄၈ မှ ၅၀ ဖြစ်ပါသည်။ အသင့်လျှော်ဆုံး စက္ကန် ၅၀ ကျော်အမျိုးသားသာခြင်းသည် အသင့်တော်ဆုံးဖြစ်သည်ဟု အများကဆိုကြပါသည်။ သံစိုင်ကိုရယူလိုသူတိုင်း အီးမဲလ်နန့်ဖြစ်စီ၊ ဖုန်းနန့်ဖြစ်စီ၊ ဘလောခ်မှတဆင့်ဖြစ်စီ ဆက်သွယ်မှာယူနိုင်ပါသည်။
Posted by khinemrathein at 9:58 AM
(၁၂) လ စက်ခွင် ရာသီသျှင်လေ
တန်းစီလို့ ပြီးဝင် ၀င်လာရေ
ထွား...တန်းစီလို့ ပြီးထွက် ထွက်လားခရေ
တုံးလုံးတုံးကျင် ဒိုးထွင်ဂျင်ပေါက် အရွယ်ရောက်ကို
ဇမ်း၊ ယီးယိုင်သာခြင်း တခုချင်းစီကျူးပြလီ
ရတုရကန် မျိုးမာန်စိတ်တက် ဖော်ကျူးပြလျှက်
(၂၁) ရာစုရထား ပြန်ထွက်မလားခင်
နှစ် (၂၀၀) ကျော် ရသည့်သင်ခန်းစာ
ဂျူလိုင် ၁၉၊ ၂၀၀၆။
Posted by khinemrathein at 9:56 AM
ရခိုင်ပြည် ငါရို့ပြည် ရက္ခစိုင်လာပြည်
၂၇၊ ၆၊ ၁၉၉၉
Posted by khinemrathein at 9:54 AM
၉၊ ၉၊ ၂၀၀၆
Posted by khinemrathein at 9:49 AM
သြဂုတ်လ ၁၈၊ ၂၀၀၆။
Posted by khinemrathein at 9:48 AM
သြဂုတ်လ ၁၉၊ ၂၀၀၅
“အဖေက ဗမာ၊ အမေက ယခိုင်ဗျာ”
“အဖေက ယခိုင်၊ အမေက ဗမာပါချိန့်”
“အာ...အဖေက ယခိုင်၊ အမေက ချင်း၊ ကချင်း၊ ကယား၊ ကရင်၊ ချမ်း၊ မွန်”
သမိုင်းရုပ်ကြွင်း အုပ်တလင်း ယှင်းယှင်းလင်းလင်း
ဂျွန်လ ၃၀၊ ၂၀၀၆။
Posted by khinemrathein at 9:45 AM
၆၊ ၁၀၊ ၂၀၀၆။
Posted by khinemrathein at 9:44 AM
နိုဝင်ဘာလ ၁၀၊ ၂၀၀၆။
Posted by khinemrathein at 9:41 AM
မေလ ၁၅၊ ၂၀၀၇
Posted by khinemrathein at 9:32 AM
အောက်တိုဘာလ ၆၊ ၂၀၀၆။
Posted by khinemrathein at 10:42 AM
အယင်က ပဒရီဖင်ကြားကျပ် ကြောရိုးမှာပွီးဝပ်လို့။
လျှပ်စစ်မာကျူရီမီးသီးများ (၂၄) နာရီထွန်းလင်းထား
ကုန်တင်ကား၊ လူတင်ကား၊ ဇိမ်ခံကား
နိုဝင်ဘာလ ၂၇၊ ၁၉၉၇။
ဆိုင်ဟာထောင်၊ မယ်ဇူရမ်ပြည်၊ အိန္ဒီယာ။
Posted by khinemrathein at 10:40 AM
ပုဇွန်၊ မျှိုင်ပေါက်စ ရင်းဒွန်းထိုးလို့မရ......။
ဓါးပြင်ဆိုးတယောက်တလက်နန့် ပြား၊ ယာခွတ်နီရေ
နောက်ကုန်း ဆားဖုံးနီစွာ သူ...မသိ......။
ပုန်းဖီ၊ ထောင့်ယောက် ခြကြီးဖေါက်
ငါ့လက်က ကလောင်ဓါး အကြောင်းမဲ့အတုံးမခံ
“ထ” တော်လှန်မည် အဓိဌာန်တည်၏......။
ဒေါင်ဒေါင်ဆန္တာထောင်၊ ကာလာကတ္တား၊ အိန္ဒီယာ။
Posted by khinemrathein at 10:37 AM
ဧပြီလ ၆၊ ၂၀၀၇။
Posted by khinemrathein at 10:35 AM
ဂျွန္န၀ါရီလ ၆ ရက်၊ ၂၀၀၅။
Posted by khinemrathein at 10:33 AM
ရွာဦးဘုန်းကြီးကျောင်းက မင်္ဂလာကြီးသံစည်တီးနီဗျာဝေ လာကတ်ဝေ
မြုံကြက်နီရေအမှောင်ညဉ့်ကို တိုက်စားပစ်ဖို့ လာကတ်ဝေ
ဖြီဖျက်မရ နာကျဉ်းချက်ဝေဒနာတိနန့် အိပ်မောကျ
အာရုံဦးမိုးထက် ကြက်တွန်သံကြားကေ လာကတ်ဝေ
ကုသမရ ဒါဏ်ရာဒါဏ်ချက်တိနန့် အိပ်မောကျ
နိုဝင်ဘာလ ၁၉၊ ၂၀၀၆။
Posted by khinemrathein at 10:30 AM
မြင်းစီးမှာမောင်းဂွတ်က၊ မီးကျည်တန်းခေါ်၊ လက်နက်တော်ကို၊ လျှင်စွာယူဆောင်ခလော့၊ သေနပ်နှင့်လှဲကမံ၊ လက်နက်များကို၊ ပီးအပ်နှံ၍၊ ကြီးစည်သံဗောမှုတ်ကာ၊ ခရာထွက်သည်၊ တိမ်ထွတ်ထက်အာကာမှ၊ တီးမှုတ်လှာဟန်မပြား၊ သောင်းဇမ္ဗူဝယ်၊ ထိန့်ဆူကျော်နှံ့ကြားမျ၊ တသောသောချီကြခါ၊ ရာပသိန်သတ်၊ မင်းမြတ်၏နောက်တော်ဝယ်၊ ပွင့်လောင်းလျာမယ့်ကြင်စ၊ ကပ်၍ပါသည်၊ ဆံမြွှာမယွင်းခွတည်း။ မှုးမတ်ကားအထဲမှာ၊ ဖွဲ့ဒါကြီးသည်၊ အသောင်းအဒူလာနှင့်၊ အဟောဒါမာတဒိန်၊ အစီရင်ထွေ၊ တိုးအောင်ကြွယ်သည်၊ အကယ်ပါလျှင်းလီ၏၊ တိုင်းရပ်မြီရခိုင်မှာ၊ ဒါးပိုင်ကြီးသည်၊ ရှိကအမတ်တော်၏၊ ရင်တွင်းမျော်ကျူး၍ဖွား၊ ထိန့်ထိန့်ဆူသည်၊ ဇမ္ဗူကျွန်းလုံးကြား၏၊ သားကြီးကားအမ်းစားသာ၊ မယ့်သက်သျှင်လည်း၊ ယင်းခါနောက်တွင်ပါလျှက်၊ ခေါ်တွင်ကာတိမ်ကြားဗိုလ်၊ မာလုံသတ်သည်၊ ရီကြောင်းချီလီဆိုက၊ နောက်တော်ကိုပါလီငြား၊ သိန်းသန်းဗိုလ်ခြီ၊ အင်္သချီသည်၊ မြီဝယ်မွန်းမျှလား၏၊ ချီတက်ငြားလီကြခါ၊ စစ်တကောင်းသည်၊ မြစ်မကိုကူးပါလျှက်၊ တက်လီသော်လက်ဝဲနား၊ ဘောင်းဒွတ်တောင်ကို၊ ပါယ်ယှောင်လွန်ကာလားက၊ လက်ယာနားပြင်ကြီးသာ၊ ဖောက်ကျီဈီးကို၊ လွန်၍လားလီပါလျှက်၊ ကန်ရှည်မှာဆိုက်မနား၊ ဟာလဘင်းခေါ်၊ စုက္ကရာကို၊ လျှင်စွာချီတက်လားလည်း၊ ရီကင်းနားဆည်ကြီးသာ၊ ပတ္တလီကို၊ ထိုခါဆိုက်ရောက်ပါ၍၊ ပင်းဝါရွာမရောက်ခင်၊ ရခိုင်ဝန်သာ၊ မောင်စံပျော်သည်၊ ယင်းမှာကြားလီကျင်၏၊ သားမောင်ပင်င၀ိုက်ကေ၊ ငါရို့သက်သည်၊ အခုသီရမည်ဟု၊ ဖက်ယပင်းငိုကြခါ၊ အတွင်းဝန်သည်၊ မှန်မှန်ကြားလီပါ၍၊ ကြောက်ဝှန်ကာတုန်လှုပ်ငြား၊ မိုးဦးခါသည်၊ ဖားသော်မြည်သောလားသို့၊ တသောသောငိုလျှက်သာ၊ တပ်လုံးသားသည်၊ ထွက်လားပြီးလီပါက၊ ဖမ်းဆီးကာရှာမရ၊ တစစ်အောင်သည်၊ ကိုယ့်သျှင်ဘုန်းကြောင့်နှင့်တည်း။ ချီတက်ကြွလိုက်လီခါ၊ ဖလောင်းချိတ်မှာ၊ လျှင်စွာရောက်တုံပါလည်း၊ တောင်ကိုသာမျှောင်ကာလား၊ ရဲစုချောင်းလွန်၊ ချီတက်ပြန်သော်၊ အမှန်မတန့်မနားတည်း။ ပန်းမော်ကားလက်ဝဲသာ၊ သင်းပေါင်းချောင်းကို၊ ပါယ်၍လွန်ခဲ့ပါလျှက်၊ မြင်းမျက်နှာတောင်အနား၊ လားလီပါသော်၊ ငတ်မော်ဆိုက်ရောက်ငြားက၊ ရဲမက်များသိန်းဗိုလ်ပါ၊ ညောင်းညာဖြီလျှက်၊ ဆိုင်းငံ့နီရပါသည်၊ မောင်တောတပ်မှာတည်းလေ။ ။
မောင်တောတပ်မှာ၊ ဆိုက်ရောက်ပါသည်ယင်းခါတွင်၊ ဥာဏလျှင်မြို့စာရွီး၊ လက်ဝဲဖက်မှာ၊ တပ်မတော်ကို၊ ဖြိုကာထွက်၍ပြီးလျှက်၊ ကြောက်ဝှမ်ကြီးတုန်လှုပ်ကာ၊ အောက်သားပျက်သည်၊ လျို့ဝှက်နီလီပါက၊ ယင်းသောခါကိုယ့်သခင်၊ အနောက်ငယ်ကို၊ လက်ဝယ်သိမ်းယူကျင်၍၊ အစလျှင်ပဌမ၊ နှောင်းဖော်ရွှီကို၊ ကျွန်းအုပ်ခန့်ပီးခလျှက်၊ ချီတက်ကြွလားကြခါ၊ အလယ်သညာ၊ ကုလားရွာမှာ၊ လျှင်စွာရောက်လီပါက၊ ယင်းတွင်သာဆိုက်မနား၊ ကျောက်ပန်းစွယ်ကို၊ လက်ယာပါယ်ယှောင်ထားလျှက်၊ တသောသောချီကြခါ၊ ပြည်ထိပ်မှတ်သည်၊ မယူနတ်ကြီးမော်သို့၊ ဆိုက်ရောက်ခါတုံပြီးမှ၊ များဗိုလ်ပါသည်၊ ယင်းတွင်တပ်ကြီးချ၍၊ တန့်ရပ်ကြနီသောခါ၊ (------)၊ သင့်ရာသားနှင့်၊ မိမ္မသားသူငယ်များ၊ ဥပမာသည်၊ သားလင်ရောက်လာငြားသို့၊ ရွှင်ပျော်ပါးဝမ်းကြီးသာ၊ အဖူးလက်ဆောင်၊ များမြောင်ပို့ဆက်လှာ၏၊ ချီတက်ကာတသောသော၊ ဦးရာဇ်တောင်သည်၊ သျှင်ပင်ဓါတ်ရောက်ငြားက၊ အထွတ်ဖျားစေတီမှာ၊ တင်းခွန်ကုက္ကား၊ မုလေးပွားကို၊ လျှင်ငြားပူဇော်ပါလျှက်၊ လားလီကတုံခါပေ၊ ကုလားပုံးကို၊ လက်ဝဲထားကာသည်တည့်။ ဆင်ခံဝယ်ဆိုက်ရောက်က၊ ကိုယ့်သခင်သည်၊ ယင်းတွင်တပ်ဦးချလျှက်၊ ကုလားကအဟောဒါ၊ မာတဒိန်ကို၊ စာနှင်စီလွှတ်ပါ၏၊ ချောင်းဖလာတပ်ထဲဝယ်၊ တလိုင်းအောက်သား၊ သျှမ်းအများကို၊ လျှင်လျားထွက်လားလီဟု၊ ကြံကာပေနီသောခါ၊ နင်ရို့များသည်၊ ကျင်းကျင်းအကုန်စွာကို၊ ရဲမက်တော်ဂူရာက၊ သတ်ဖြတ်မည်ဟု၊ အကယ်တည့်တည့်ပြော၍၊ ခုလျှင်လျားတုတ်နှောင်မည်၊ တမန်လွှတ်လျှက်၊ ခေါ်ဗတ်ပြောတုံပေလည်း၊ နားမလည်းအောက်သားမှာ၊ ကောင်းမည်ထင်ဗျာ၊ ယင်းတွင်တွင်းတူးပါလျှက်၊ ကြွက်ဟန်သာနီတုံငြား၊ စာရေးကြီးသည်၊ င၀ိုက်ကေနှင့်၊ နားခံမောင်လုံးများရို့၊ အမှားမှားနီကြခါ၊ ကိုယ့်သခင်သည်၊ ယင်းတွင်မာန်ကြီးပါ၍၊ ဂေါ်မီတော်မော်သတ်နှင့်၊ မောဇော်ကတ်တင်၊ သောက်သတ်လျှင်လည်း၊ ခုပင်ချီလားကြဟု၊ နှုတ်သံမြချခါဝယ်၊ ရီဗိုလ်ချုပ်သည်၊ လျှင်စောချီတက်လီ၍၊ တိုက်ကြပြီးတုံသောခါ၊ သျှမ်းအောက်သားသည်၊ ပြီးငြားမလွတ်ပါတည်း။ နားခံတော်မောင်လုံးမှာ၊ လက်ဝါးပေါက်လျှက်၊ ပုန်းရှောက်ထွက်ပြီးပါ၏၊ င၀ိုက်ကေစာရွီးမူ၊ အောက်သားများသည်၊ သဲဖျားကြွီလှုပ်တုန်မျှ၊ အငတ်မှုမစစ်သာ၊ လင်းကဲအသွင်၊ တောထဲဝင်၍၊ ယင်းတွင်ပြီးလီကျင်က၊ ချောင်းဖလာတပ်ကြီးကို၊ ဘုန်းတော်အားနှင့်၊ လျှင်လျားတိုက်ခိုက်ဖြိုသည်၊ ငြိုးသိုစကားကြောင့်လေ။ ။
ငြိုးသိုမှန်စွာ၊ တိုက်ကြပါသည်ယင်းခါတွင်၊ အုန်းတပင်တပ်မမှာ၊ မိုးကောင်းဗိုလ်နှင့်၊ ငချေးကြားလီပါက၊ ကြောက်ဝှမ်ကာတုံလှုပ်ငြား၊ တပ်လုံးသူသည်၊ ဆောင်းတွင်ချုပ်ထားငါးသို့၊ သီမိမောအသွယ်သွယ်၊ ကြောက်ဝှမ်ကြီး၍၊ ထွက်ပြီးကြလီ၏။ ချီတက်ပေကိုယ့်သခင်၊ ကျွဲခြံတောင်မှာ၊ လျှင်စွာဆိုက်ရောက်ကျင်က၊ များလူသျှင်ရဲမက်တော်၊ ကျွဲနွားတောင်းလတ်ပါသည်၊ ပွင့်လောင်းလျာမယ့်သခင့်၊ ရခိုင်ပြည်ဝယ်၊ ဟိသည်လူမွန်းဖျင်ကို၊ စုလုံးကျင်ခေါ်သောခါ၊ သလွန်တောင်ကို၊ စီရင်အုပ်ထိန်းပါလျှက်၊ ကျွန်းအုပ်သာငရှောက်ဖွေ၊ တောင်ဖက်ကျွန်းကို၊ ထိမ်းသိမ်းစီရင်ပေ၍၊ ဖော်ရှီသည်ကျွန်းအုပ်ကား၊ ၀မ်းကြီးသာ၍၊ လျှင်စွာရောက်လာငြားတည့်။ မူဇဲကကျွန်းအုပ်သာ၊ ငကြောင်ပြိန်းတော၊ လျှင်စောရောက်ကြလာလျှက်၊ စစ်တွေမှာကောင်းစံရွှီ၊ တောင်ရင်းကျွန်းနီ၊ ပေါ်ထွန်းဝီနှင့်၊ ပြသျှေဝင်းကျွန်းနီ၏၊ ပြားကျွန်းဆီအသက်နှံ၊ ကျိန်းရှိနောက်မှာ၊ ကျွန်းအုပ်မောင်သာကြံလျှင်၊ လာကြပြန်တုံသောခါ၊ ပြည်လုံးသားသည်၊ သောသောရုရုဆာ၍၊ ဆိုက်ရောက်လာတုံပေက၊ မယ့်ချစ်မောင်သည်၊ ယင်းတွင်အားကြီးရ၏၊ လိုသမျှကျွဲနွားပေ၊ ဆန်ရီစပါး၊ ဆီပျားထောပတ်များကို၊ ယူဆောင်လာဆက်ပီးခါ၊ ---
သောသောရုရုဆာလျက်၊ ပြီးလီခါတုံကပေ၊ မောင်စံပျော်နှင့်၊ နားခံငကျက်ကေတည်း။ င၀ိုက်ကေမောင်ရဲသာ၊ လေးယောက်စုံသည်၊ ပူးတုံဖက်ကြပါလျှက်၊ ငိုကြရာတသျှုတ်သျှုတ်၊ ကြက်သိမ်းဝှန်သည်၊ လိပ်ပြာထွက်လုတ်လုတ်တည်း။ ဆစ္ဆီစုတ်မျောက်ရီငန်၊ သူငယ်သားကို၊ ဖမ်းစားသည့်ဟန်သို့၊ မျက်ဆန်သာခပြူးပြူး၊ ဆံပင်ဖားရား၊ ၀မ်းဖားဖားသည်၊ ခြီကိုကားရားပြုလျှက်၊ ဖားပြုတ်အသွင်၊ သျှမ်းအောက်သားရို့၊ ပြီးငြားကျင်သည်၊ ငွေတောင်ပေါက်ဝကလေ။ ။
ငွေတောင်ပေါက်က၊ ပြီးလားကြသည်ယင်းမှသာ၊ ဗိုလ်ချုပ်ခေါ်တွင်၊ ၀န်ငမင်သည်၊ သဲဖျားကြသိမ်းဝှန်၍၊ အကြံကိုရှာမရ၊ ပြီးလားကြသည်၊ ဘီလူးမတန်းခါးမှတည့်။ ပန်းဈီးမြောင်းကိုလွန်၊ မိုးကြိုးဂျိုင်ကို၊ စိုင်ကာလားလီပါလျှက်၊ ၀က်ချောင်းသာပယ်လွန်ငြား၊ တက်လီပါသော်၊ ချင်းရွာတောင်ခြီနားက၊ ပုန်းလျိုးငြားကုတ်ရှုတ်ကာ၊ ဗိုလ်ချုပ်ဧကန်၊ အတွင်းဝန်သည်၊ အမှန်ပြီးလီပါက၊ ရှာကြရာတသောသော၊ ဂျီဒရယ်သည်၊ ဆတ်ငယ်ကိုယ်အလားသို့၊ လမ်းစပ်ကြားခြုံထဲမှာ၊ မြို့သူကြီးကို၊ အလျှင်ဖမ်းမိပါ၏၊ သက္ကရာဇ်မှာတထောင်ဖြစ်၊ တရာ့သျှစ်ဆယ်၊ စွန်းဝယ်သျှစ်ခုနှစ်က၊ တန်းခူး၏လဆန်းမှာ၊ ဆယ့်လေးရက်သည်၊ သောက်ကြာနိတွင်မှာတည်း။ တပိုဝ်ကျော်နီထွက်ဝယ်၊ ရန်ခပ်သိမ်းကို၊ ပျောက်ငြိမ်းအောင်မြင်ပေက၊ ၀မ်းသာထွေအားရကျင်၊ ဓည၀တီ၊ ရခိုင်ပြည်ကြီးတွင်၌၊ ပုရိန်ပြင်အထဲမှာ၊ မြသွင်နတ်ကို၊ ပသပူဇော်ပါလျှက်၊ ကောင်းသည့်ခါနိရက်ဝယ်၊ ရဲမက်ဗိုလ်ပါ၊ လူတကာကို၊ ယင်းမှာစုရုံးပါ၍၊ ရခိုင်ပြည်မြို့ထဲမှာ၊ ဘာသာလျှောက်၊ ပြောင်းမီးပေါက်သို့၊ ပစ်မြှောက်ပူဇော်ပါလျှက်၊ အောက်သားသာပိုင်ကာလ၊ သျှင်ဘုရင်မှာ၊ နန်းသက်ဖော်၍၊ ရွှေဂူစေတီမဟု၊ ခေါ်တွင်ထလူတကာ၊ တိုက်ဝန်မင်းသည်၊ တည်ရင်းစေတီတော်ကို၊ ဖြိုဖျက်ကာပစ်လျှက်ပေ၊ ယင်းတောင်ထိပ်မှာ၊ အိမ်ကြီးဆောက်လုပ်တည်၏၊ ကိုယ့်ပြည်ဝယ်သျှင်မင်းကြီး၊ ကောလိယရာဇာ၊ တည်လုပ်ပါသည်၊ သျှင်တော်မဟာထီးကို၊ ချိုးဖဲ့ပြီးလွှင့်ပစ်ကာ၊ စောမွန်တည်ပြု၊ မင်းဗာလုပ်သည်၊ တံတိုင်းမြို့ဝင်းတော်ကို၊ ဖြိုဖျက်ကာပစ်၍ပေ၊ သိုက်စာထွက်ကို၊ သျှမ်းအောက်သားသည်၊ လိုက်လျှင်းပြုကြသည်တည်း။ နောင်ခါဝယ်တုံပြီးမှ၊ မယ့်သက်သျှင်ကို၊ ယင်းတွင်အာဏာချလျှက်၊ ဂူရာနှင့်မြင်းစီးသာ၊ စဖာအိတ်သည်၊ နီဖို့လိုင်းအိမ်တော်ကို၊ ဆောက်လုပ်ကာပီးရမည်၊ တောင်းလတ်ပါသော်၊ လွတ်လပ်ခန့်ခွဲပေလျက်၊ ၀ါးသက်ကေကြိမ်သစ်ပင်၊ ဗဲကပ်သားနှင့်၊ လျှင်စောဆောက်လုပ်ကျင်၏။ ရာထောင်ပင်အိမ်မက၊ လုပ်ရပါသည်၊ ယင်းခါတဌာနတည်း။ ခေါ်တွင်ကြလူတကာ၊ ရာပသိန်သတ်၊ မင်းမြတ်နှုတ်ရွှေဝါနှင့်၊ ဟမြွက်ကာချလတ်သည်၊ ရမ်းပြည့်မြို့နှင့်၊ သံတွဲမာန်အောင်ဝယ်၌၊ ဟိနီသည့်အောက်သားကို၊ ဇော်နေဟုမှတ်၊ မယ်ကာရီသတ်သည်၊ လွတ်လပ်တိုက်ခီဆိုက၊ ကတ်တင်ဗိုလ်မေဇော်သတ်၊ သင်္ဘောစီးကာ၊ ချီကြပါသည်၊ မြစ်မှာစင်းချင်းစပ်မျှ၊ လွတ်လပ်သာချီလား၍၊ မာန်အောင်မြို့မှာ၊ လျှင်စောရောက်လီ၏လေ။ ။
ရောက်ကြဧကန်၊ တိုက်ကြပြန်သည်အမှန်သာ၊ ယင်းသောခါမြို့ဝန်ကား၊ ရဲစက်ကေသည်၊ ထိုဝယ်သျှမ်းအောက်သားလည်း၊ ကြောက်ဝှန်ငြားမကြံသာ၊ ကိုယ့်မယားကို၊ လက်ဖျားဆွဲကိုင်ကျင်လျှက်၊ များတကာဖော်မရ၊ နှစ်ယောက်တည်းပင်၊ တောထဲဝင်၍၊ ခြုံတွင်ပုန်းလျိုးကြလျှက်၊ တခဏနီသောခါ၊ ဇော်နော်ခေါ်မှတ်၊ မယ်ကာရီသတ်သည်၊ ၀န်းပတ်ထားလျှင်းပါ၏၊ ဖမ်းဆီးကာယူ၍ပေ၊ နှစ်ယောက်စုံကို၊ လွယ်ကူရလီသည်တည့်။ သင်္ဘောတွင်ဆောင်ပြီးခါ၊ ကုလီကတ္တာ၊ ရွှေမြို့တော်မှာ၊ လျှင်စွာပို့လီပါ၏၊ ရမ်းပြည့်မှာဝန်ပြုသူ၊ မောင်ယံကလည်း၊ အကယ်ကြားလီတုံက၊ မောင်ဗျဲမူအခွန်ဝန်၊ နှစ်ယောက်လူသည်၊ တိုင်ပင်ပြုကြပြန်၏၊ အသတ်ခံနီးသောခါ၊ ငါရို့သက်သည်၊ ဆုံးပျက်မည်ခန္ဓာတည်း။ သူရို့သာမရောက်ခင်၊ မြို့ကြီးကိုလွှတ်ကျင်လျှက်၊ ထွက်၍ပြီးကြကျင်အံ့။ ပြောတိုင်ပင်ပြုပြီးခါ၊ အောက်သားမိုက်သည်၊ ထွက်လားပြီလီပါ၏၊ သံတွဲမှာတဌာန၊ မြို့သူကြီးဟန်၊ ငပန်းစံကို၊ လျှင်မြန်ခွတ်ထစ်ကြ၏။ မြို့ဝန်ကားရွှေမန်းသာ၊ အောက်သားများသည်၊ သောသောရုရုဆာလျှက်၊ တောင်ရိုးသာစီး၍ပေ၊ ပြီးလားငြားသည်၊ အရှိနိုင်ငံပြည်သို့၊ ဖမ်းဆီးဖွေရှာမရ၊ သုံးမြို့စုံကို၊ လက်ဝယ်သိမ်းရုံးရ၏။ ပိုးလောက်မျှတကောင်ပင်၊ သျှမ်းအောက်သားကို၊ ငေါက်ငေါက်ထောင်၍မမြင်တည်း။ ရခိုင်တွင်မြို့ကြီးမှာ၊ ရာပသိမ်သတ်၊ မင်းမြတ်နှုတ်ရွှေဝါနှင့်၊ ကိုယ့်ပြည်ရွာကျွန်းများဝယ်၊ တန်သည့်သူကို၊ အရာခန့်အပ်မည်ဟု၊ ဟမြွက်ထွေဆိုပြီးခါ၊ အသီးသီးသည်၊ ကိုင်းချောင်းကျွန်းများစွာကို၊ ကျွန်းအုပ်သာချောင်းစားခန့်၊ ပရန၀ါ၊ ထိုခါပီးဆင့်အပ်၏။ နောက်တထပ်အမိန့်တော်၊ ရခိုင်သားသည်၊ အများမြို့ကျွန်းရွာ၌၊ ဟိနီကျင်လူရို့မှာ၊ အောင်ကျော်ပန်းရွှီ၊ သော်တလီကို၊ နှိုင်းယှဉ်ဖက်မဲ့သာတည်း။ ငါ့ထံမှာမြဲခစား၊ အကျိုးတော်ကို၊ ပြီးအောင်ဆောင်ရွက်ငြား၏၊ ပီကျွန်းနှင့်ယိုးကျွန်းပေ၊ ဦးရစ်တောင်လည်း၊ ယင်းတွင်ပါလီစီလော့။ ပီချောင်းဝယ်လေးမြို့သာ၊ ယိုးချောင်းနယ်လည်း၊ ထိုခါထည့်လိုက်ပါ၍၊ ကျွန်းအုပ်သာခန့်၍ပေ၊ သားစိုင်မြီးဆက်၊ မပျက်စားရလီအံ့၊ ဟမြွက်ထွီဆိုသောခါ၊ ဖွဲဒါးကြီးသည်၊ လျှင်စောရွီးတုံပါလျှက်၊ ပရန၀ါဆပ်ကြီးခတ်၊ ငါးရွက်စာကို၊ ထိုခါချက်ချင်းအပ်က၊ မယ့်သက်မှတ်ပွင့်လောင်းလျာ၊ ကျွန်းချောင်းဖျားကို၊ သိမ်းငြားပြုစုပါ၍၊ သင့်ရာရာအလုံးကို၊ ချမ်းငြိမ်းသာယာ၊ မစပါသည်၊ ကိုယ့်မှာသားရင်းပမာသို့၊ ရှိပြုကျိုးကုသိုလ်ကံ၊ မိဘရပ်မြီရခိုင်ပြည်မှာ၊ လွယ်လွယ်ရောက်လာပြန်၍၊ ပျော်စံပါးတသောသော၊ မွီးမိခင်သည်၊ နို့သျှင်ချွေးမများကို၊ မခြားဆံတမျှင်၊ နှံသည်သက်ကို၊ တရက်မကွာချင်ဘဲ၊ နွှဲပျော်ရွှင်နီကြ၏။
Posted by khinemrathein at 10:28 AM
စန္ဒသူရိယ၊ နာမထင်လင်း၊ ပြည်သျှင်မင်း၏၊ ညွတ်စင်းကော်ရော်၊ တောင်းပန်သော်ကြောင့်၊ သုံးဘော်မျက်ရှု၊ သဗ္ဗညုလည်း၊ ၀ိသုကြုံဖန်၊ ဘုံဗိမာန်ဖြင့်၊ တိမ်ယံကောင်းခင်၊ ဝေဟာခွင်မှ၊ များဖျင်သံဃာ၊ ထေရ်ငါးရာနှင့်၊ မဟာသက္ကရာဇ်၊ တရာ့နှစ်ဆယ်၊ စွန်းဝယ်သုံးခု၊ ဥတုဂိံမှံ၊ နွီလကဆုန်၊ ပူဟုန်ပြင်းစွာ၊ ၀ိသာခါလျှင်၊ မကွာယှဉ်ထ၊ ထိုသည်လ၌၊ ဓည၀တီ၊ မြို့ဌာနီသို့၊ ကြွချီပြီးခါ၊ ပြည်ဓညာကို၊ ၀ါစာနှုတ်ထွက်၊ မိန့်မြွက်ဗျာဒိတ်၊ ပန်းတံဆိပ်ကို၊ ခပ်နှိပ်ပြီးခါ၊ မဟာမုနိ၊ တုမဟိသည်၊ နှံမ့်သိပေါ်ထင်၊ ရုပ်ရှင်တော်ကို၊ သွန်းသော်ပြီးမှ၊ များလှသံဃာ၊ အရိယာလျှင်၊ ခြံကာဝန်းရံ၊ ရထားပျံဖြင့်၊ တိမ်ယံမို့မို့၊ ကောင်းခင်သို့လျှင်၊ တက်ပြီးကျင်မှ၊ စက်ရှင်ဖြန့်မြန်း၊ ဒွါရာနန်းသို့၊ ကြွလှမ်းသောခါ၊ အဉ္စနာနဒီ၊ ခေါ်မည်တွင်လစ်၊ လေးမြို့မြစ်သို့၊ လွန်ရစ်ပြီးခါ၊ မြတ်စွာဘုန်းကြီး၊ စောထွတ်ထီးလည်း၊ မိူးသီးနတ်တောင်၊ ထိပ်လည်ကောင်၌၊ တန့်အောင်မချွတ်၊ မတ်မတ်ရပ်လျှက်၊ နီလတ်ပြီးခါ၊ လက်ယာတော်ရံ၊ သြရသံဟု၊ ထေရ်မွန်သာရိ၊ မည်ဟိသညာ၊ ပုတ္တရာကို၊ မိန့်မှာမြွက်ကြား၊ ဗျာဒိတ်ထားယင့်၊ ဘုရားသာသနာ၊ နှစ်ထောင်မှာဝယ်၊ စွန်းကယ်ငါးရာ၊ လွန်သောခါလျှင်၊ တေဇာမောက်ပြီး၊ မိုးသီးနတ်တောင်၊ ထိပ်လယ်ကောင်၌၊ မြင့်ခေါင်ဘုရား၊ ငါရုပ်ပွားကို၊ အများပြည်သူ၊ သျှင်လူရဟန်း၊ ၀မ်းပန်းတသာ၊ တည်ထားလာအံ့။
Posted by khinemrathein at 10:24 AM
ဆီမီးခွက် ဆီမီးခွက် ဆီမီးခွက် မင်္ဂလာပါ......။
ဒေသန္တရ လူမျိုးခြားလည်း မခွဲခြားပါ
ရခိုင်၊ ဒိုင်နက်၊ သက်၊ မြို၊ ခမီး၊ ကမာန်လည်းပါ
သြဂတ်စ်လ ၁၅၊ ၂၀၀၆။
ဤကဗျာတေးခြင်းကောင်းမှုဖြင့် ဆရာကြီးဦးသာထွန်းအား ကန်တော့လိုက်ပါ၏။ ဆရာကြီးကောင်းရာသုခတိလားပါစီ။
Posted by khinemrathein at 10:22 AM
စိန်ဘုရား၊ မြဘုရား၊ မုနိကျန်ဘုရား
မျှိုင်၊ ပုဇွန်၊ ငါးတန်းကားလည်းမကျန်ဗျာ
ရွှီခဲ၊ မြခဲ၊ ပတ္တမြားခဲ......။
တရုပ်၊ အိန္ဒီယာ၊ ကိုးရီးယားလည်းပါ
ရွှီခိုင်ပြည်ကြီး “ဖွဲ နန့် ပြာ”......။
၃၀၊ ၀၇၊ ၂၀၀၆။
ဒေါင်ဒေါင်ဆန္တာထောင်၊ ကါလါကတ္တား၊ အိန္ဒီယာ။
Posted by khinemrathein at 10:20 AM
ရခိုင်၊ ဒိုင်းနက်၊ သက်၊ မြို၊ ခမီး၊ ကမာန်
သမိုင်းဝိဇ္ဇာ၊ ကွန်ပျူတာ၊ ဆီးဝါးအတတ်ပညာ
မေလ ၁၁၊ ၂၀၀၆၊
Posted by khinemrathein at 10:18 AM
၂၉၊ ၁၊ ၁၉၉၃
Posted by khinemrathein at 10:14 AM
၀၉၊ ၀၉၊ ၁၉၉၉။
Posted by khinemrathein at 7:17 AM
၀က်တောင်း ကြက်တောင်း ခွီးတောင်း
အရက်လည်းတောင်း သောက်ကြူးကတ်တေ --။
မီးပုံဖေါ်လို့ ကခိုင်းရေ --။
အဘာကို (စခန်းတခေါက်လိုက်ခဲ့ပါ) လို့
ရွာဦးက ဇရပ်ရှိမှာကျားထိုးသတ်လိုက်ကတ်တေ --။
တခါလည်း ပေါ်မလာလီဗျာယ် --။
Posted by khinemrathein at 7:11 AM
ရခိုင်ပြည်တနိ မုက္ချလွတ်မြောက်မည် --။
မြီကြီးလက်ခတ်မလွဲကျိန်းသီ သေချာရေ --။
အေပြီလ ၂၄ ရက်၊ ၂၀၀၅
ဒေါင်ဒေါင်ဆန္တာထောင်၊ ကာလာကတ္တား၊ အိန္ဒီယာ။
Posted by khinemrathein at 7:09 AM
ကြမ်းပိုးနံ့တနံနံ ခွာပဲ့ အနားပြန် နှခွမ်းလန်
သင်အား စားလိမ္မည်သတိထား --။
သြဂုတ်လ ၁၄ ရက်၊ ၂၀၀၃
ဘင်္ဂလားဒဲခ်ျ့ နိုင်ငံ AASYC ယုံး၌ရွီးစပ်ခြင်းဖြစ်ပါ၏။
Posted by khinemrathein at 7:06 AM
အမှန်ရမည် ရခိုင်ပြည် --။
ဂျူလိုင်လ ၃ ရက်၊ ၂၀၀၆
Posted by khinemrathein at 7:04 AM
ဂျွန်လ ၆ ရက်၊ ၂၀၀၄
အန္ဒမာန်ကျွန်း၌ကျဆုံးလားခရသော ဗိုလ်ရာဇာနှင့်တိုက်ပွဲဝင်သူရဲကောင်းရို့အား အေကဗျာဖြင့်ဂုဏ်ပြုလိုက်ပါသည်။
Posted by khinemrathein at 7:02 AM
ရခိုင်ဂေါင်းတုံး၊ ဗမာသုံး မျိုးပြုံးအောင်ကြံ၊ ပေါင်းဖျက်တရားခံ၊
လိုက်လံစီးစစ်၊ ရှိကြောင်းနောက်ဖြစ်၊ သူတပါးအကြိုက်၊
ဖြစ်ရတဖန်၊ ကျောင်းကန်သိမ်ပုထိုး၊ စေတီအုပ်ကျိုး၊
ညွှန်သည်လက်ညှိုး၊ ထိုးသည်မလွဲ၊ ခွဲစိတ်တူးရှာ၊
ကျောက်မျက်ရတနာ၊ မြပဒေသာ၊ စိန်ပဒေသာ၊
ရတနာကိုးပါး၊ သွမ်းလုပ်ထား၊ မြတ်စွာဘုရား၊
ကိုယ်တော်ပွား၊ တပါးမဖိတ်မချန်၊ ယူကြပြန်သည်။
ယူလီမငြား၊ ဗမာစစ်သား၊ နိုင်ငံရပ်ခြား၊ လက်လီလက်ကြား၊
ရောင်းစားဈီးစုံ၊ မျိုးဂုဏ်သက်သွီး၊ ဖျက်ဆီးထိုခါ၊ မျိုးလက်ရာ၊
လက်ရာမျိုးရိုး၊ တစိုးမကျန်၊ မျိုးမာန်စိတ်ကျိုး၊ မြာတိုင်ရိုးဆွီး၊
ကျသည်ပုလုတ်၊ သွီးစုပ်ဖောက်ပြန်၊ ပြားတန်ဆယ်တန်၊
ရာတန်ထောင်တန်၊ ထောက်လှမ်းလုပ်ကြံ၊ စားခွက်ကြွင်းကျန်၊
လျှာရည်သိမ်းပြန်၊ ရိုးကြွင်းကျန်ကိုက်၊ ခိုက်ရန်သူဖြစ်၊ တဂစ်ဂစ်၊
သျှစ်ရပ်မျက်နှာ၊ နီစရာဇကာ၊ ခြံကာမဟိ၊ ကြောက်စိတ်စိမ့်ဝင်၊
ဆင်သည်ပွဲကြီး၊ နဂါးစီးလျက်၊ တုတ်ဓါးသံလျှက်၊
လူသတ်လက်နက်စုံ၊ ကတ္တားအဖုံဖုံ၊ ရိုးတောင်ကျော်ခုန်၊
ကြံစုံမျိုးမစစ်၊ ဖမချစ်သား၊ သားစိမ်းငါးစိမ်းစား၊
ကြီးထွားဖုတ်ကောင်၊ သွားစွယ်ထောင်၊ သရဲသဆီမျှောင်၊
နတ်သျှောင်ဂေါင်းစွပ်၊ ချွတ်မကျွတ်၊ မကျွတ်ထိုခါ၊
မှော်တတ်ဆရာ၊ နတ်ကောင်းဆရာ၊ ဗုံမပါ-နှဲမပါ၊
ကျီးဖြူရွာမှာ၊ အုံ....ဖွ..သုံးခါ၊ မာန်းမှုတ်ရာ၊
သူဆက်လေးခါ၊ မတတ်သာ၊ လင်းပြာဖုတ်ကြီး၊
ဓါးကြီးထမ်းလျက်၊ အိမ်ဦးထွက်၊ ခြံပျက်မဏ္ဍိုင်၊ ဧရာမခိုင်၊
ရခိုင်မှန်သား၊ ပြီးလွှားထိုခါ၊ တောတွင်းမှာ၊ ကြံရာမတတ်၊
သွားပုတ်လီလွှတ်၊ ချင်းချင်းသတ်သီ၊ ဇာတိမျိုးကြီ၊
ပျက်သည်ဖောင်စည်း၊ နိုင်ငံရေးမုန်တိုင်းထဲ၌၊ လူးနစ်မွန်းမြုတ်၊
သူ့ကိုသူသမုတ်၊ ငါရာအဟုတ်၊ အမှန်လုပ်ပြ၊ ကျီးပုတ်ကုလားကျ၊
ပြုပြမိတ်ဆွေ၊ စစ်တကောင်းနယ်သား၊ ဘင်္ဂလီကုလားအား၊
ရောင်းစားပထ၀ီ၊ ညက်ညက်ကြီ၊ လွှတ်လီသွားပုတ်၊
အံ့ဖွယ်လူယုတ်၊ သမုတ်ပြည်သူ၊ ကျွက်ကျွက်ဆူ၊
လူသူမကြိုက်၊ ဖဲ့ပစ်တိုင်ပြည်၊ သူကြံစဉ်၊ တိုင်းပြည်ရေးထက်၊
၀မ်းရေးခက်၊ ကိုယ်ကောင်းစားကျက်၊ သူ့တွက်သူကြံ၊
ကြွင်းကျန်လူမိုက်၊ ခိုက်ရန်သူဖြစ်၊ အပြစ်လုပ်ကြံ၊ ခွဲထွက်ပြန်လည်၊
ပြန်လည်ခွဲထွက်၊ သွီးစက်စိမ့်ယို၊ ထိုမျှလက်နက်၊
လုယက်ထွက်ခွာ၊ ကြံခါတသက်၊ ပျက်တချက်၊
“အို...သူသက်မချစ်၊ မျိုးချစ်ရာဇာ၊ အန္တမာန်-နီကိုဘာ၊
ကျွန်းသာသွီးသောင်ပြင်၊ သမိုင်းတွင်ကျန်၊” လူဖျင်းဖျက်ဉာဏ်၊
လိုက်လံစီစစ်၊ နောက်ကြောင်းရှိဖြစ်၊ ရွီးထုတ်ပစ်ရမည်။
ပစ်မည်ရွီးထုတ်၊ တသုတ်မကျန်၊ ဆန်ခါကြွင်းချန်၊
လူမှန်မျိုးချစ်၊ နွံမနစ်အောင်၊ နောင်လာနောင်သား၊
ကောဇာသက္ကရာစ် (၂၀၀၄) ခုနှစ်၊ နိုဝင်ဘာလ (၉) ရက်နိ၊ အိန္ဒီယာနိုင်ငံ
ကာလကတ္တား ဒေါင်ဒေါင်ဆန္တာထေင်းတွင်း၌ ဤကဗျာရတုအား
ရွီးစပ်၍ပြီးစီးပါ၏။ ဘုရား၊ တရား၊ သင်္ဃာ လက်ဆယ်ဖြာထိပ်မှာမိုး၍
ရခိုင်ပြည်သူအပေါင်း ကောင်းကြောင်းမင်္ဂလာ အောင်ကြောင်းဖြာစီသတည်း။
Posted by khinemrathein at 7:00 AM
ဘ၀နင်းပြား ကျမန့်ကောင်းသား --။
သြဂုတ်လ ၁ ရက်၊ ၂၀၀၆
မေလ ၃၁၊ ၂၀၀၄
ဒေါင်ဒေါင်ဆန္တာထောင်၊ ကာလာာကတ္တား၊ အိန္ဒိယာ။
Posted by khinemrathein at 6:54 AM
လက်အုပ်ချီဗျာ ကန်တော့ပါ --။
တတ်အောင်ကျွမ်းအောင် သင်ယူပါ --။
အောင်လံတော်ကို ထမ်းချီပါ --။
ရက်မြတ်ချိန်ခါ မင်္ဂလာပါ --။
Posted by khinemrathein at 6:51 AM
Generals busied with seizing power.
Posting soldier in line with full of equipment,
Pointing the guns to be ready,
While people and soldier were in tug-of-war,
General spit the order out "Fire"
Warrior soldier fired into large crowd,
Branches of Olive fall down,
Doves slump down on streaming blood,
The ownerless school bags sprawling on streets,
Tumbling exercise books were swirling in rosy stream.
Innyar lake's bridge be memorised to be 'Red Bridge'
But immortal slumbering souls snoring with
"Tyranny, Tyranny" Down, Down!"
"Military rule" "Down, Down!"
"We want!" "Democracy!"
Thousands of student were forced to leave
Their beloved class-mates,
Schools, schools' compounds, universities, universities' compounds,
compelled to be rebel in jungles
Again to restore the democracy and human rights
Which are the whole citizens alike.
In people's desire they sacrificed their lives.
From the nests,
Mothers with eternal ambitions,
Still hoping for their nestling come back,
Eventhough the information are neglect,
No messages, no letters post back,
In fulfilling for their sacrificed friends' desires,
Nestlings are struggling and marching in the wars,
With sometime home-sick, sometime school-sick,
The love of parents sometime they miss.
The heavy troops of military regime
Have been locating in all ethnic regions
To defeat all activities of self-determination,
Democracy, Human Rights,
With using the ideas of demoralize and terrorise
In the civil war zone,
It is the military junta's wont
Since the 1988 nation-wide democracy uprising
In which conflict the blood of civil
Has endlessly been leaking and oozing.
While mother democracy in cordon cell
Sick with malaria inacorner of Ain Sein Jail
The children in Burma
suffering with HIV+AIDS ill,
The rest with arid souls
Being forced to be labour roles.
The rosy roses on infertile soil
Being pushed to be molls.
The gaols with full of prisoners
Be the students' and politicians' centres,
And captives are peaceful demonstrators,
Non-violent-lovers and freedom-fighters.
The schools with empty chairs
Be the heavens of doves' souls-
Which are flying on high than the higher.
The soldier with licences to rape,
Are marching on the wars,
Rape the ladies and girls,
Gangsters and detectors in bars
Spying the people's sounds,
No suspects found,
But drinking and dancing with
With popular cocaine and heroin business,
Ailing with HIV and AIDS,
Become the world poorest.
But generals in dictatorship to dictatorship
Has been seizing power longer than the longest.
Thousands of young man, lady and girl,
Have been leaving their homes,
Enter Thailand and work in motel, restaurants, bars,
Some are the sex-dealers, some are man-sellers,
Some are cocaine and heroin carriers, become drug users,
Some are factory workers, tailors, sailors, sea-fishers
And most of ladies and girls are sex-workers
Carrying HIV and AIDS booms
Come back to their homes.
With using the chauvinistic strategies,
Has been driving the aborigines out to be
Thousands of hundreds of homeless refugees.
Lifting, marauding, looting the civil properties,
Refugees are suffering with malaria, typhoid, cholera,
Dengue, ill and dying outside of their land's boundaries.
From one of Keren Refugee camps
A school girl said "I miss my village.
I wanna go home and live in peace"
Khine Mra Thein (Choung Tha Gree)
Dum Dum Central Jail, Kolkatta, India.
Posted by khinemrathein at 6:50 AM
တိမ်တိုက်မိုးသားကောင်းခင် ချိန်ကိုက်လှိုင်းဂယက်ရင်ခွင် သမုဒ္ဒရသွီးသောင်ပြင်ထက် တခန်းရပ်ဇနက္ကဇာတ်စင် သွီးမုန်တိုင်းဆင် --။
ရိုးမအားမာန် ရိုးမကျောက်ဆောင် လှိုင်းသောင်းရာထောင်...